पत्नी पीडितहरुको व्यथा
ठुलेका हजुरबुबा गाउँदेखि जिल्लासम्म नै चिरपरिचित व्यक्ति भए पनि छुट्टिएर बसेका थिए । उसका बुवा प्रायः भारततिर बस्नुहुन्छ । उसले घरमा आमालाई सघाउँदै धेरै दुःख गरी पढ्दै हुर्केको थियो । समयसँगै ठुलेको जवानी पनि बढ्दै गयो । घरमा भाइबहिनी सानै थिए । बुबाले घरमा आमा र भाइबहिनीलाई सहयोग नगरिदिँदा ठुले सधैँ चिन्तित देखिन्थ्यो । लक्का [..
तिमी जरुर ब्रह्मचारी बन्न सक्छौ, बुढेसकालमा अनसन र निराहार बस्न सक्छौ अनिकालमा तिमी हजार न..
मलाई हुतिहारा अनि ऊ पौरखी मान्छे भन्छ यो समाज समाजको नजरले मलाई हुतिहारा देख्दा उसलाई पौरख..
तिम्रो संसार अनि मेरो संसार बेग्लै छ तिमी माथि हिमाल छेउको गाउँबाट म तल क्षितिजसम्म फैलिएक..
गजल : जताजता मुखर्जी उतै लम्पसार
जताजता मुखर्जी उतै लम्पसार परेको देखेँ एक चोटि हैन दुई चोटि हैन बारम्बार परेको देखेँ ।। स्..
जताजता मुखर्जी उतै लम्पसार परेको देखेँ एक चोटि हैन दुई चोटि हैन बारम्बार परेको देखेँ ।। स्वाभिमानलाई धुलो चटाएर, खरो उत्रिएका नेता ताल्चा ठोकी नागरिकलाई लाचार परेको देखेँ ।। नाकाबन्दीको उपहार महानगरको ताल्चा बुझाएर नागरिकलाई सास्ती दिएर स्वागतमा सरकार परेको देखेँ ।। गोर्खाली फौजको भर नपरेर भारतीय फौज भित्र्याई जताजता मुखर्जी उतै..
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि तिहार आयो अनि गयो । उत्साह र उमङ्गले भरिएर आएको तिहार जान त गयो तर तर फूलमायाजस्ता कैयौँ गरिबलाई ऋणको भारी बोकाएर गयो । फाटेका झुत्रा कपडा अनि बाँसका भाटाले बारेर बनाएको सानो घर, ४ छोरीमध्ये साना दुईवटी शारीरिक अपाङ्ग छन् भने अरू दुई छोरीले जन्मेदेखि अहिलेसम्म ओछ्यान छोडेका छैनन् […]
कथा–गुड्डुुको चिया पसल
मङ्सिरको महिनामा नेपालगन्जको जाडो दिन काट्न कम्ती पट्यार लाग्दो थिएन । यस्तो चिसोमा गुड्डुुको चिया पसलले स्थानीयलाई निकै सहज बनाएको थियो । उसको चिया पसलमा ठूलो एलइडि टिभी र वाइफाई पनि थियो । यो चिया पसल नभए कसरी दिन काट्थे होला नेपालगन्जबासी । यस्तै कुरा सोच्दै गुड्डुको चिया पसलमा बसिरहेको थिएँ । पसलमा पाँच सातवटा […]
कथा : कठै ! चम्पा
‘र अन्त्यमा लीले मिस्त्री खाडी जाने फिक्सजस्तै भयो । गुडिया जस्ता दुई बहिनी छोरी र फूलजस्ती चम्पालाई छाडेर लालबहादुर साउदी उड्ने टिकट हातमा च्यापेर अन्तिम भेटका लागि गाउँ फर्कियो । जुम्ल्याहा छोरीहरुको राम्रो रेखदेख र पढाइको जिम्मा चम्पालाई सुम्पिदै लीलबहादुर बोल्यो– ‘यिन्को ख्याल राखेस्, उज्ज्वल भविष्यका लागि तीन बर्ष दुख गर्छु..
घोच्दो रैछ ठुल्दाइ काँडे पिरतीले दीपक आचार्य ‘जलन’ घोच्दो रैछ ठुल्दाइ काँडे पिरतीले तिम्लाई अनि मलाई काँडे पिरतीले तनावको भारी यो कस्तो हो बिमारी खाली टाउको दुखाइ काँडे पिरतीले भोक छैन भन्छौ निद छैन भन्छौ कसले चोर्यो भाइ काँडे पिरतीले कोही माया गर्छन अनि मरिहत्ते गर्छन जिन्दगीलाई डुबाइ काँडे पिरतीले बीस वर्ष पालिन छोरो बूढी [&he..
कथा : बदलिएको नाता
नाताहरुकै भीडभाडका बीचमा फेरि नाताहरु गाँसिन्छन् । कति नाता जीवनभरका हुन्छन् त कति क्षणभरका । यस्तै नाताको भीडभाडमा गाँसिएको ‘यौटा फरक नाता’ । बीबीएस दोस्रो वर्षको परीक्षा चलिरहेकै थियो । परीक्षाको समयभर मोबाइल स्विचअफ गर्ने र बाहिरी ब्यक्तिको सम्पर्कबाट टाढा रहने मेरो पहिलेदेखिकै बानी हो । घरमा हप्ताको एक पटक फोन पनि प्रायः गर्..
कविता : प्यारी लोल
भन्नेले भन्छन् मीठो कोदाको झोल खानेले भने मीठो गुन्द्रुक को झोल तर मलाई मिठो यै स्वदिस्ट लोल । दुइतिर ठाडो लौरो बिचमा गोल तीन अक्ष्यरको शब्द सबैले बोल स्पेलिङ एस्को एल ओ एल लोल । जिस्क्याउदा लेख्ने एल ओ एल लोल हासो को सङ्या एल ओ एल लोल टार्नलाई लेख्ने नखोल्न पोल । ओल्लो टोल […]
यात्रा संस्मरण : आफ्नै भूमिमा त्रसित मन
बिहानको साढे पाँच बजेको छ । एक्कासि निन्द्राले छाडेपछि झ्यालको पर्दा उघारे । आँखै अगाडि जोमसोम बजारलाई काखमा राखेर निलगिरि र तिलिचो पिकले मन्द मुस्कान छरिरहेको थियो । मलाई हिमालहरु हेर्न औधी मन पर्छ । त्यसैले जहाँ जान्छु उठ्नासाथ हिमाल देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर हेर्ने गर्छु । हामी कोरला नाका जानका लागि हिँडेका थियौँ । […]
‘दशैं’ सौतेलो भो, खैलाबैला मच्चियो । निधारको टिका धेरैले दुस्खी गरिबलाई माड खान भनि डोनेट गरे । जन्मदै खोट थिएछ क्यार ! कसैको घरमा अटाएन । ‘तिहार’ साख्खे भाई परे । ‘दशैं’ गए लगत्तै, मादलहरु रमाएर सयपत्रीको माला लगाई उफ्री उफ्री नाच्दैछन् घरदैलो आंगनिमा छरछिमेक र टोलै थर्कने गरि भट्याउँदैछन् ए ! भन भन भाइ […]
कथा : कन्ये कान्छा
कन्ये कान्छा आज हङकङ छाड्दै छ्र । उसलाई हङकङ बस्न रत्तिभर मन छैन । उमेर ढल्कँदै जाँदा मायालुले समेत छाड्दै गएका छन् । दार्जिलिङकी शेर्पिनी कान्छीले छाडेपछि त उनलाई हङकङ बस्न मनै छैन । उनी सधैंका लागि नेपाल फर्कदै छन् । बाँकी जीवन आफ्नै जीवनसंगिनीसँग बिताउनेछन् । संवत् २०२५ मा उनी २० वर्षका थिए । […]
फेरि आँगनमा काग कराउन थाले । भुस्याहा कुकुर पनि इज्जतिलो तरिकाले गाउँघर डुल्न थाले । आँगनभरि रङ्गीबिरङ्गी सिन्कामारी सुक्न थाले । सबैका घरमा चिल्ला रोटी पाक्न थाले । अनि निधारमाथि हत्केलाले छाया पार्दै स्याउली डाँडोतिर फर्केर ठूलीले मनमनै भनी, ‘रने दाइ ! तिम्रो निधार रङ्गाउने धोको थियो !’ हरेक बर्ष तिहार आउँछ । सबैका घर [&helli..
साथ लाग्नेको गन्ती छैन आँशु पनि आएर जोडियो कतै । के मात्रै गुमाउनु मैले कति मीठा खुसीहरु छोडियो कतै । सुरुमा बाटो सीधै देखेर जिन्दगीको यात्रा अगाडि बढाएँ । सबै देखेजस्तो नहुनाले प्रगतिको दोबाटो मोडियो कतै । मलाई कसले मार्ने हो विषको पर्खाइमा छु म त । माया गर्ने कोही भए किसको पर्खाइमा छु म […]
कविता : खासमा मलाई तिमी मनपर्छ
मलाई फूल मनपर्छ मलाई जून मनपर्छ हिमाल, हरियाली र शान्त मनपर्छ नाम, दाम अनि शान सब मनपर्छ तिमी जेजस्तो मन पराउँछौ ती सब मलाई पनि मनपर्छ तिमीले नखाऊ भनेका रोक लगाएका सबथोक मलाई पनि मनपर्न छाडेका छन् तिमीले हिँडेको बाटो तिमीले छोएका फूलहरू तिमी बस्ने ठाउँ तिम्रा आफन्तहरू सब सब आफ्नै लाग्छ अब त बुझै […]
लघु कथा : सत्यम् शिवम् सुन्दरम
रातको पहिलो प्रहर थियो ! गोली पड्केको र रुवाबासीको आवाज आइरहेको थियो । म व्युझिँदा मेरो नजर तलतिर पर्ने गयो । गर्मी मौसम भएकाले म छतमा सुतिरहेको थिएँ । यसो चियाए मात्रै थिएँ, कालो मुखुण्डो लगाएका बीस पच्चीस जना जतिले गाउँ घेरी आतक मच्चाइरहेका रहेछन् । मैले कुनै आवाज ननिकाली कौसीबाट ती दृश्य निहालिरहेँ । […]
दिदीको चिठी : पिरदेशी भाइलाई भाइटीका लगाइदिने इच्छा
प्यारो भाइ, बाँचेकै छौ या यो लोकमै छैनौ, थाह पत्तो छैन । तर तिमीलाई नसम्झिएको दिन छैन । हर प्रहर तिम्रै यादले सताइरहन्छ । भाइ, तिमी विदेशिएको पनि पन्ध्र वर्ष हुन लागेछ । यति वर्षसम्म घर, देश, आमाबुबा र प्यारी दिदीको माया मारेर कसरी बस्न सक्यौ ? तिमीले भुलिसक्यौ होला भाइ, त्यो दिन जब एयरपोर्टमा […]
यात्रा संस्मरण :मुस्ताङसम्मको यात्रा
बिदाको समयको सदुपयोग गर्ने सबैका आआफ्नै तरिका हुन्छन् । छोटा छोटा बिदामा खानपिनमा रमाउने, फिल्म हेर्न जाने, साथीभाइ जमघट गर्ने तथा पारिवारिक भेटघाटमा रमाउने इत्यादि तर अलिक लामो बिदामा पछिल्लो समयमा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँमा घुमफिर गर्न जाने चलन अलिक बढ्दै गएको महसुस हुन्छ । अझ युवा पिँढीमा यो लहर बढी नै मौलाएको देख्न स..
धानको बाला फल्छ खेतमा कुलो भएपछि आउँछ खुसी आफ्नै हातमा तुलो भएपछि श्रमिकलाई खेतबारीमा घामपानी हुन्छ योजनामा काम पारेर गर्छु ठूलो भएपछि जाँदैन अब काम खोज्न विदेश कहीँ पनि हुँदैन काम हात र खुट्टा लुलो भएपछि समयलाई चिने विकास हुन्छ एक दिन पाक्छ खान ग्यास अनि चुलो भएपछि चल्छन् मेरो हात पाखुरा खुसी खोज्नलाई फल्छन् […]
चे अर्थात विश्व क्रान्ति नायक हो उनैको चेला हुँ म मलाई वेदनाका विदारक धुनहरुले रति पनि छुँदैन भावानामा बहकिएर पिन्चे, कायर र चट्के बनी हिक्किएर पनि म रुदिनँ न त कुनै घात प्रघातदेखि भाग्न सक्छु न त जिउँदै मर्न सक्छु म चेको चेला हुँ चे अर्थात यौटा बफादार सिपाही यौटा डाक्टर जन गायक र निःसन्देह […]
कथा : कालीको बिहे
सुधिर बा र मुरली काका साँझपख फलैँचामा बसेर भलाकुसारी गर्दैछन् । सुधिर बाले घरि–घरि दसमुजा परेको निधर खुम्च्याउँदै लामो श्वास फेर्दैछन् । त्यत्तिकैमा मुरली काकाले सोध्नुभो हैन, तपाईं किन आज चिन्तित देखिनु हुन्छ ? सधैँ हसिलो मान्छे, अनेक मनगन्ते टुक्काले सबैलाई हसाउनु हुन्थ्यो । के पर्यो र त्यस्तो भन्नोस् न मलाई पनि ? मुरली काकाले..
एउटा सपनाको दुःखद निधन
सपनाहरू देखेर मात्रै नहुने रहेछ… कतिपय सपनाहरू पूरा गर्नै गाह्रो… पूरा हुँदै नहुने सपनाहरू देख्नै नहुने रहेछ . . . विगत लामो समयदेखि म एउटा सपना देखिरहेको थिएँ… तर, त्यो सपना, जो मैले देखेँ– त्यो अब कहिल्यै पनि पूरा नहुने गरी टुक्रा टुक्रा भएर यत्रतत्र सर्वत्र छरिएको छ… टुक्रिएर छरिएको त्यो सपनालाई, म अब ..
काठमाडौं सबैको सपनाको सहर भएजस्तै मेरो पनि त्यही सपना थियो । एसएलसीमा प्रथम श्रेणी ल्याउन सके मेरो काठमाडौं यात्रा निश्चित हुने थियो । सोचेजस्तै भयो । पढ्नका लागि काठमाडौं हिँडियो । मेरो स्वभाव अनुसार दुईजना मात्रै अत्यन्तै मिल्ने साथी बनाउन सकेँ । म धेरै साथी बनाउन सक्दैन थिएँ । एक रात साथीहरु सन्तोष र […]
कथा : एक्लो घर
काँधमा एउटा राहतको त्रिपाल, हातमा एक बोरा चामल र साथमा आफ्नै त्रसित अनुहार लिएर टुँडिखेलमा बास खोज्दै हिँडेको बुद्धिमान् फेरि बेलुका पाँच रेक्टरको भुँइचालो आएपछि अझ आहत आहत बन्न पुग्यो । सरकार पुनर्बासको कुरा उठाइरहेको थियो । टुँडिखेलमा पाल हालेर बस्ने मानिसहरु उत्तिकै थिए । कसैले सोध्यो “घर छोडेर आउनुभएको कति भो ?” प्रत्युत्तरम..
कविता : परदेशीको तिहार
चाडबाड आउने गर्छन् पालै पालो गाउँ घरमा सम्झी रूँदै बस्न बाध्य परदेशी यो बिरानो सहरमा फोनमा दिदी रूने गर्छिन् तिहारमा आउन भाइ भनी, बाध्यतामा वर्षौं बित्छ अर्को साल आउँछु भनी फूल टिपी रातो मखमली माला गाँस्ने मेरी दिदी शत्रु मार्न ओखर दाना फोर्ने सँघारमा मेरी दिदी खाली निधारमा मेरो सप्तरङ्गी भर्न मन पराउँछिन् नाङ्ले टपरीमा [&helli..